Hetsika iray tena tia mandray kilema eto Hawaii
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Hetsika iray tena tia mandray kilema eto Hawaii
Hetsika mpankafy kilalao Hawaii
Tsy mbola nankany amin'ny lūau ratsy aho, fa samy hafa ny tsirairay amin'izy ireo. Rehefa nitady luau malalaka an-kalamanjana misy malalaka sy misy toerana manaitra aho dia nisafidy an'i Ka Moana Lūau, miorina eo amin'ny Sea Life Park Hawaii eo amin'ny lafiny Windward tsara tarehy any Oahu.
Manome naoty 10 na 10 mahery ity luau ity ho toy ny hetsika mora raisina kilema ity mpanoratra ity - fantaro ny antony.
Lehilahy iray nandehandeha mody hoe mpanenona ravina rofia no tena tompon'antoka nanadino fa nahazo ny traikefa tsara indrindra ny mpanjifa tsirairay.
Mandresy ny loza mety hitranga amin'ny fitaterana.
Ny endri-javatra tiako hialana dia ny lūaus eo an-tampon'ny tranon'ny simenitra ary ireo izay manana latabatra fitsangatsanganana an-databatra nilentika anaty fasika sivy santimetatra izay mety tsy hamindra seza misy kodiarana mandeha amin'ny herinaratra. Ity iray ity dia noporofoina taminà hetsika Hawaii izay mora raisina kilema.
Ka Moana Lūau dia miorina amin'ny ilany atsinanana amin'ny faritra somary lavitra any Oahu. Any amin'ny faritra maitso mavana ao amin'ny nosy no misy azy. Ao ambadiky ny sehatra lehibe dia ny Nosy Rabbit manaitra sy ny rano polinezika turquoise. Ny velaran-tany dia tanety volkano ahitra, tsy misy sakana, ary mora mivezivezy amin'ny seza misy kodiarana na rehefa mandeha eo am-pitaterana kalesy zaza.
Ny latabatra dia rakotra lamba tropikaly maro loko, natokana halalaka ho an'ny Fiarovana COVID-19, ary miorina eo amin'ny hantsana mangatsiaka manatrika dingana midadasika kokoa. Noho ny haben'ny sehatra, ny fampisehoana dia mety hampiantrano latabatra marobe hijerena akaiky. Nirehareha miloko mazava, mpandihy mahery vaika ary feo milamina ny andiany tsirairay. Tena nahafinaritra ireo mpandihy tahisianina, tiako indrindra.